6 Qaababka Loola Shaqeeyo Saamaynayaasha Aan Lahayn Kafilo | Martech Zone
Inkasta oo dad badani ay aaminsan yihiin in suuq-geyntu ay u gaar tahay shirkado waaweyn oo leh kheyraad aad u badan, waxaa laga yaabaa inay la yaabto in la ogaado in badanaa aysan u baahnayn miisaaniyad. Noocyo badan ayaa hormuud ka ahaa suuqgeynta saamaynta leh oo ah qodobka ugu muhiimsan ee ka dambeeya guushooda ganacsiga e-commerce, qaarna waxay ku sameeyeen tan qiimo eber ah. Saamaynayaashu waxay leeyihiin awood weyn oo ay ku horumariyaan summadaha shirkadaha, kalsoonida, daboolida warbaahinta, warbaahinta bulshada ee soo socota, booqashooyinka websaydhada, iyo iibinta. Qaar ka mid ah hadda waxaa ku jira xisaabaadka ugu weyn Youtube (ka fikir Ciyaartoyda caanka ah ee Youtube sida PewDiePie kaas oo leh macaamiil 111M ah oo yaabka leh) ama xisaabaadyo kala duwan oo ganacsi oo gaar ah (tusaale ahaan tani waa bukaan-socodka iyo saameeyayaasha dhakhaatiirta ee shaqeeya).
Iyada oo la saadaaliyay suuq-geynta saamaynta ku leh inay ku sii socoto koritaanka 12.2% ilaa $4.15 bilyan sanadka 2022, Noocyada yaryar waxay la kaashan karaan kuwa saameeya si ay uga caawiyaan suuq-geynta badeecadooda iyo adeegyadooda, waxayna tan ku samayn karaan wax yar kharash la'aan. Waa kuwan 6 siyaabood oo sumaduhu ula shaqayn karaan dadka saamaynta leh iyagoon kafaala qaadin:
1. Wax-soo-saarka Wax-soo-saarka ama Hibada Adeegga
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee ay summaduhu ula shaqayn karaan saameeyayaasha iyaga oo aan wax lacag ah ku bixin boostadooda waa iyada oo loo marayo hadiyado alaab ama adeeg. Waxay ka faa'iidaysan karaan alaabtooda waxayna siin karaan saameeyayaasha beddelka halka saameeyay ku bixiyo xaddi cayiman oo caymiska warbaahinta bulshada ah. Talada pro waa in aad had iyo jeer la xiriirto saameeyayaasha adiga oo soo jeedinaya in aad jeclaan lahayd inaad bixiso hadiyad adoon muujinin cabbirka saxda ah ee sarrifka. Sidan, dad badan oo saameyn sare leh ayaa laga yaabaa inay ka jawaabaan codsigaaga maadaama aysan dareemin "la riixay" inay ka jawaabaan iyada oo aan la helin. sinnayn ganacsiga. Ganacsiga aan sinnayn Waxay dhacdaa marka barta Instagram-ka ee saamaynta leh ay ka kharash badan tahay badeecada ama adeegga laftiisa.
Astaantu had iyo jeer waa in ay ogaataa in dadka wax saameeyaa ay helaan daraasiin iyo mararka qaarkood xitaa boqollaal goobood oo summada ah maalintii, sida ay tahay arrinka saameeyayaal badan oo sare. Sababtan awgeed, saaxiibtinimo dheeraad ah iyo nasasho leh oo ku saabsan shuruudaha iskaashiga ayaa u oggolaanaya calaamadda inay calaamad u tahay saameynaha in ay xiiseynayaan in ka badan oo kaliya "qeylin" degdeg ah oo halkii ay raadinayaan wadashaqeyn muddo dheer ah.
Berina Karic, khabiir ku takhasusay suuqgeynta Wakaalada Suuqgeynta Saamaynta Sare, sidoo kale waxay soo jeedinaysaa in si asluubaysan loo daba galo marka alaabta la helo. Taladeeda ayaa ah inay la xidhiidho qofka wax saameeya si uu u waydiiyo haddii ay heleen oo ay jeclaysteen hadiyaddooda, iyo haddii ay rabaan inay wax beddelaan. Noocan ah is dhexgalka saaxiibtinimo waxay u badan tahay in ay dhaliso dhibco waaweyn oo ay hesho astaanta astaanta.
2. Safarrada saamaynta leh
Astaantu waxay qabanqaabin kartaa safar oo waxay martigelin kartaa saameynayaal badan waxayna heli kartaa toban jeer qaddarka caymiska ee kharashka gaadiidka, cuntada iyo hoyga. Tusaale ahaan, astaantu waxay martigelin kartaa shan saameyneyaal si ay ugu safraan meel gaar ah oo ay wakhtigan u isticmaalaan fursad ay ku abuuraan nuxurka alaabta iyo sidoo kale daabacaan qoraallo badan oo dib u eegaya alaabta ama adeegga. Istaraatiijiyadan PR waxaa adeegsada noocyo badan oo raaxo leh halkaas oo ay ku leeyihiin saameynayaal sare waxay abuuraan qoraallo badan oo kor u qaadaya astaanta fursad ay ku safraan oo ay la qaataan hal-abuurayaasha kale ee saamaynta leh. Safarrada saamaynta leh waxay sidoo kale siinayaan karti ay sumad ku horumariso curaarta dhow ee saamaynta leh oo siinaya sumadda fursad ay ku beddelaan qaar ka mid ah saamaynta ugu wanagsan ee wax-soo-saarka danjirayaasha calaamadda alaabada dheeraadka ah ee soo dhejinta warbaahinta bulshada.
Istaraatiijiyadani waxay ahayd Waxaa hormuud ka ahaa summadaha ugu horreeya ee bulshada sida Revolve, halkaas oo ay ku martigelin lahaayeen dhowr saameynood oo sare si ay goobo qalaad u beddelaan 10-15 ee boostada quudinta iyo daraasiin fiidiyowyo sheeko maalinle ah iyagoo calaamadeynaya astaanta.
3. Dhacdooyinka Saamaynta
Summadahaas aan awoodin inay abaabulaan safarrada, dhacdooyinka saameeyayaasha ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan nooc la maarayn karo oo shuraako ah halkaas oo saameynayaashu ay ku dhejin karaan qaybo badan oo ka mid ah nuxurka beddelka ka qaybgalka dhacdada. Astaantu waxay qabanqaabin kartaa dhacdo xafiiskooda, makhaayadda, ama meelaha kale ee madadaalada waxayna siin karaan dambiisha hadiyadaha dadka wax saameeya si ay ula kulmaan badeecada ama adeegga shakhsi ahaan. Kooxda gudaha waxa kale oo ay la kulmi karaan saameeyayaasha fool ka fool oo ay si toos ah u sharxi karaan faa'iidooyinka alaabta iyada oo u oggolaanaysa dadka saamaynta leh in ay sawiraan ama filimaan muujinta astaanta. Talo-bixintu waa in la bixiyo a gaar ah iyo Instagrammable goob halkaas oo saameynayaashu ay sawirro ka qaadan karaan hoosta calaamadaha qurxinta ama la wadaagi karaan goobaha miiska ee si qurux badan loo qurxiyey iyaga oo wata maro-gashiyo gaar ah ama calaamado boos celin ah.
4. Iskaashiga Brand-ka-wadaagaha
Calaamaduhu waxay kala qaybin karaan kharashka martigelinta dhacdo ama safar saameyn leh iyagoo la xidhiidha noocyada kale lana wadaaga fursadahooda ololaha saamaynta. Noocyo badan oo aan tartan lahayn ayaa si gaar ah u furan iskaashiga noocan ah maadaama ay helayaan faa'iido buuxda oo ka mid ah iskaashiga qayb ka mid ah kharashka iyada oo aan loo baahnayn in ay u adkeystaan ​​​​dadaal buuxa ee maaraynta ololaha weyn ee saamaynta. Waxay ka qaybqaadan karaan iyagoo ku daraya alaabtooda dambiisha hadiyadaha ah ama iyagoo siinaya meel bannaan, hoteelo, safar, ama nooc kale oo adeeg ah iyadoo ku xiran warshadaha ay ku takhasusaan. Noocyada waxay xitaa aadi karaan ilaa hadda si ay u yeeshaan lamaanayaal badan oo ka qaybqaata oo ay abuuraan khibrado saameyn leh oo aan caadi ahayn kaas oo siinaya qadar ballaadhan oo caymis ah dhammaan dhinacyada ay khusayso.
5. Amaahda Alaabta Saamaynaysa
Noocyada noocaan ah ee aan awoodin inay hadiyado u bixiyaan, gaar ahaan marka shaygu qaali yahay ama uu yahay nooc ka mid ah, waxay soo jeedin karaan nooca amaahda ee iskaashiga. Noocan iskaashiga ah waxa ku lug leh saamayn-yeele abuurista nuxurka isticmaalaya shay, soo celinta ka dib marka toogashada la dhammeeyo, ka dibna la wadaago shayga kanaalada bulsheed. Shirkado badan oo PR-da ugu sareeya ayaa istiraatijiyadan u isticmaala sawiro sawiro halkaas oo ay ku amaahiyaan qaybo ka mid ah kooxaha tifaftirka ee warbaahinta sare oo kaliya si ay u codsadaan in alaabtaas dib loo soo celiyo marka toogashada la dhammeeyo. Tani waxay si fiican u shaqeysaa marka saameeyayuhu uu raadinayo qalab ama qaybo gaar ah oo lagu daro qayb ka mid ah nuxurkooda cusub.
6. Iskaashiga Saamaynta Warbaahinta
Haddii astaantu aanay awoodin inay hadiyad siiso ama xitaa amaahdo shay, waxay kula shuraakoobayaan saamayn ku yeelan karaan iskaashiga warbaahinta wadaagga ah. Tani waxay ku lug leedahay sumad lagu sugayo daboolida warbaahinta iyada oo loo marayo siidaynta saxaafadeed, waraysiyo, ama nooc kale oo la sheegayo, ka dibna lagu daro saameyne sheekadooda qayb ahaan isdhaafsi xayaysiis dadaal. Calaamaduhu waxay ka wada xaajoon karaan shuruudaha iskaashiga ka hor, ka dibna waxay yeelan karaan saameyn-bixiye wadaaga maqaalka warbaahinta ee bulshadooda marka ay calaamadeynayaan astaanta.
Si kasta oo ay tahay cabbirka astaanta, la shaqaynta dadka saamaynta leh waxay caddayn kartaa inay tahay hab kharash-ku-ool ah oo lagu xayaysiiyo ganacsiga laguna horumariyo summaynta, iibinta, caymiska warbaahinta, iyo warbaahinta bulshada ee soo socota. Calaamaduhu waxay isticmaali karaan xeelado hal abuur leh si ay u xaqiijiyaan iskaashiga guul-guusha iyada oo aan bangiga la jebin. Markaad sahamiso noocyada kala duwan ee is-weydaarsiga saamaynta leh, shirkaddu waxay go'aamin kartaa istaraatiijiyadda ugu waxtarka badan ka dibna waxay sii wadi kartaa dhisidda dadaalkooda suuq-geyneed ee ku saabsan iskaashiga guuleysta.
Tags: Berina kariciskaashiga saamayn ku lehdhacdooyinka saameeyasuuqgeynta suuqgeyntawakaaladda suuq-geynta saamaynta ku lehiskaashiga warbaahinta saamayn ku lehwax soo saarka amaahashadahibo wax soo saarka influencerhibaynta adeegga influencersafarrada influenceriskaashiga sumadda lammaanehibo adeegganacsiga aan sinnayn